FlightAware Flight Tracker 5.6.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
Application မ်ား ခရီးသြားျခင္း & ေဒသဆိုင္ရာ FlightAware Flight Tracker
FlightAware Flight Tracker ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အခမဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပျံသန်း tracker နှင့် Android များအတွက် FlightAware ကနေလေယာဉ်အဆင့်အတန်း app ကို!
ဒီ app ကိုသင် real-time ပျံသန်း status ကိုခြေရာခံများနှင့်မည်သည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါနိုင်ငံများတွင်ယေဘုယျလေကြောင်း (ပုဂ္ဂလိက, ပဋိညဉ်စာတမ်း, etc) ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမြေပုံလေယာဉ်လမ်းကြောင်းမြင်ဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်။
လေယာဉ်ပျံမှတ်ပုံတင်ခြင်း, လမ်းကြောင်း, လေကြောင်းလိုင်း, လေယာဉ်နံပါတ်, မြို့တစ်စုံ, ဒါမှမဟုတ်လေဆိပ် code ကခြေရာခံ။ ဒေတာ tracking NEXRAD ရေဒါ overlay နှင့်အတူလေယာဉ်ခရီးစဉ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အပြည့်အဝ-screen ကိုမြေပုံများကိုပြည့်စုံပါဝင်သည်။
, real-time တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာပျံသန်းသတိပေးချက်လက်ခံရရှိလေဆိပ်နှောင့်နှေးကြည့်ရှု, (မိုဃ်းကောင်းကင် overhead အတွက်) အနီးအနားရှိလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုတွေ့မြင်နှင့်ပိုမို!
သင့်ရဲ့ Contacts ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်သင်အခြားသူတစ်ဦးထံသို့စေလွှတ်ခံရဖို့လေယာဉ်တပ်လှန်ဖန်တီးရန်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှသာအသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့အခြားမည်သည့်လမ်းရှိသင့် contacts list ထဲသိမ်းဆည်းထားသို့မဟုတ်ထုတ်လွှင့်ကြပါဘူး။
FlightAware Flight Tracker အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
FlightAware Flight Tracker အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
FlightAware Flight Tracker အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
FlightAware Flight Tracker အား အခ်က္ျပပါ
cramik စတိုး 11 20.09k
FlightAware Flight Tracker ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း FlightAware Flight Tracker အခ်က္အလက္
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://flightaware.com/about/privacy
လက်မှတ် SHA1: 5D:36:36:F3:16:05:77:7C:7D:3F:D8:71:65:67:E9:BC:86:F4:E9:EF
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Bob Keathley
FlightAware Flight Tracker APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ